Mirror Lab 2.3.2.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.3.2.1 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
Application မ်ား ဓာတ္ပံုဆိုင္ရာ Mirror Lab
Mirror Lab ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
★ 3D effects
★ swipe through 40+ preset options to browse through possibilities in an instant
ကြေးမုံ Lab က ဖန်တီးမှုဓါတ်ပုံတွေကိုမြှင့်တင်ရန်အရှိဆုံး, ပျော်စရာသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ Photo-editing app ကိုဖြစ်မှန်ဓာတ်ပုံများဖြစ်စေလျက်, kaleidoscope images နဲ့မျက်နှာများနှင့်ရှုခင်းဖျက်ပေးရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကြေးမုံ Lab မှယခုအခါအစွမ်းထက်ကာတွန်း module တစ်ခုနှင့်တကွကြွလာ။ key ကိုဘောင် (အပလီကေးရှင်း settings ကိုမှဗီဒီယိုကိုသက်ဝင်ရန်သေချာစေပါ) အကြား parameter သည် Interpol နှင့်အတူချောချောမွေ့မွေ့ဗီဒီယိုများဖန်တီးပါ။
50+ filter များ, မျိုးစုံဒဏ်ငွေ-tunable options များနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။
★ဂန္ symmetry: အလျားလိုက်နှင့်ဒေါင်လိုက်ထင်ဟပ်
★ဂယက်ထ, လေပြင်း, ဆန့်နှင့်အခြားပျက်ယွင်း
★ kaleidoscopic နှင့် fractal ဆိုးကျိုးများ
★ 3D သက်ရောက်မှု
★တြိဂံဖွဲ့, pixel မျိုးနှင့် halftone ဆိုးကျိုးများ
ထိုကဲ့သို့သောအစင်းများနှင့်ကျိုးဖန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်★ချို့ယွင်းအနုပညာဖော်ရွေ filter များ
★သင့်ရဲ့ image ကိုဖွင့်တောက်ပဆန့်ကျင်ဘက်, ရွှဲ, vignetting နှင့်ပိုပြီးညှိ
တစ်ချက်ချင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေမှတဆင့် browse မှ 40+ ကြိုတင် options များမှတစ်ဆင့်★ပွတ်ဆွဲ
အားလုံး Filter ကိုမတူညီရလဒ်ကြီးတစ်ခုအကွာအဝေးအဘို့အခွင့်ကိုထိန်းညှိဖို့အတော်ကြာ parameters တွေကိုအတူပါလာ။
အကျိုးသက်ရောက်မှုများများသောအားဖြင့်ရိုးရှင်းစွာအရွယ်အစားအဘို့အနေအထားနှင့်ကို double-Touch-ဆွဲဘို့ရိုးရှင်းသော Touch-ဆွဲအားဖြင့်ထားရှိနိုင်ပါသည်။
သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျအသုံးအများဆုံး parameters တွေကိုအချို့သည်:
အကျိုးသက်ရောက်မှုများ★လြော့ (အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ဗဟိုကနေနောက်ထပ်, ပြင်းထန်မှုတညျးဟူသော)
အဆုံးမဲ့ဖန်တီးမှုရွေးချယ်စရာအဘို့အ filter များရေးသားပါ။ အဆိုပါ + button ကိုချက်ချင်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှု reapplies - အချို့သောသက်ရောက်မှု stacked ခံရဖို့ကြိုက်တယ်!
ဒီ app သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကကျောကိုခြေရာခံဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အင်အားကြီးပြန်လုပ်ရသည့်စနစ်ရှိပါတယ်။
ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံး Toolbars scroll နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ အောက်ခြေဘား၏ညာဘက်သက်ရောက်မှုအများကြီးရှိပါတယ်!
တစ်ဦး In-app ကိုဝယ်ယူအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည် PRO ဗားရှင်းအပို filter များ, အပို parameters တွေကိုအဆင့်မြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် Lossless file ကိုကယျတငျ (PNG) နဲ့လာပါတယ်။
Mirror Lab အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Mirror Lab အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Mirror Lab အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Mirror Lab အား အခ်က္ျပပါ
appsdo စတိုး 1.35k 269.01k
Mirror Lab ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Mirror Lab အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.3.2.1
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://ilixa.com/privacy.php
App Name: Mirror Lab
Release date: 2019-08-14 13:40:01
လက်မှတ် SHA1: C7:EB:99:E4:6E:75:9F:0C:A3:ED:89:E4:AE:5A:10:4D:44:85:FD:AE
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Fran?ois Morvillier
အဖွဲ့အစည်း (O): Ilixa ltd.
နယ်မြေ (L): Nottingham
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Nottinghamshire
Mirror Lab APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ